प्रेमिका सूर्यमालासँग प्रेम विबाह गरेका सरोज खनालले दशैँको दिन काठमाडौँबाट गरेका थिए विबाह – Gazabkonews
प्रेमिका सूर्यमालासँग प्रेम विबाह गरेका सरोज खनालले दशैँको दिन काठमाडौँबाट गरेका थिए विबाह
प्रेमिका सूर्यमालासँग प्रेम विबाह गरेका सरोज खनालले दशैँको दिन काठमाडौँबाट गरेका थिए विबाह, विबाहमा जम्मा २० रुपैयाँ खर्च गरियो भन्दै त्यो दिनको कथा सम्झेर दुवै हाँस्दा हाँस्दै रोए, त्यतिबेलाको प्रेम रोमान्सका कुरा सम्झिँदै विबाह अघि जय नेपाल हल भित्र सूर्यमालाई अँध्यारोमा केसम्म गरेनन् सरोजले, हेर्नुहोस् सरोज खनाल र सूर्यमालाको यस्तो रोमाञ्चक प्रेम कहानी हेर्नुहोस् भिडियोमा
विबाह गरेको केही दिनमा नै के भयो चर्चित कलाकार आशा खड्कालाई ? आशालाई किन सँधै यस्तो समस्या आइरहन्छ ? रक्षा गर प्रभु
गणतन्त्र दिवस मनाइँदै : लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्रको दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ ।नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण औपचारिक रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन नसके पनि भर्चुअल र विभिन्न अनौपारिक माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना गर्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रुपमा स्थापित भयो । संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चल्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो । विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् । तितो सत्य, जय भोले, छक्का पञ्जा जस्ता चर्चित फिल्म र टेलिफिल्ममा जब्बर महिलाको भूमिकामा खेलेकी वरिष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी गिरि हुन् करोडौँ सम्पत्तिकी मालिक्निी, फिल्ममा कडा स्वभावमा देखिए पनि वास्तविक जीवनमा छिन् निकै नम्र र कोमल स्वभावकी, काठमाडौँमा नै भब्य महल ठडाएकी लक्ष्मी हुन् भगवान् शिवको कडा भक्त, उनको घर भित्रै छ शिवको भब्य मन्दिर, भब्य घरभित्र स्विमिगं पुल समेत रहेछ लक्ष्मीको, लक्ष्मीको घरमा पुग्दा देखियो कहिल्यै नदेखिएको माहोल, हेर्नुहोस् यो विशेष भिडियो
यो गत वर्षका तुलनामा ४.१ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट घण्टा तथा झण्डै ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।त्यसैगरी २०७७ फागुनसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कालोपत्रे सडक १५ हजार ९७४ किलोमिटर, खण्डास्मित आठ हजार ५८२ किलोमिटर र कच्ची सडक नौ हजार ९७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।यस्तै सबै सरकारी विद्युतीय सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा पु¥याउन नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा उत्साहजनक प्रगति हासिल भएको छ । काठमाडौँको ऐतिहासिक धरोहरका धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूललगायत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।चर्चित नायक पल शाहकी प्रेमीका भनिएकी चर्चित मोडल गरिमा शर्माले कसिन् सुटुक्क लगनगाँठो, गरिमाले पललाई नै थाहा नदिइ विबाह गर्नुको कारण यस्तो रहेछ, के पैसाका लागि आँफुभन्दा निकै जेठा युवकसँग विबाह गरेकी हुन् गरिमाले ? अब पललाई के जवाफ देलिन् ?
गत वैशाखमै तिङ्कर सर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी अझै व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुमै छ । विगतमा स्थानीयवासीको बसाइँसराइ (कुञ्चा) सर्नुभन्दा अगावै छाङ्गरुबाट तिङ्कर सर्दै आएका प्रहरी यस वर्ष भने जेठ दोस्रो सातासम्म छाङ्गरुमै बसेको छ । व्यासका बासिन्दा गत वैशाख पहिलो साता सदरमुकाम खलङ्गाबाट कुञ्चा सरेका थिए । सदरमुकाम खलङ्गामा गर्मी बढेसँगै स्थानीयवासीको कुञ्चा छाङ्गरु र तिङ्कर उक्लिएका थियो । नेपाल प्रहरी यस वर्ष पहिलोपटक छाङ्गरुमै बाह्रैमास बसे पनि छाङ्गरुबाट तिङ्कर उक्लिन सकेको छैन ।गत मङ्सिरमा छायालेक तिङ्कर प्रहरी चौकी व्यासको छाङ्गरुमा झरेको थियो । तिङ्करमा बढी हिमपात हुने भएपछि सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीको टोली छाङ्गरु झरेको हो । अहिले तिङ्करमा स्थानीयवासी सरिसके तर प्रहरीमाथि उक्लिएका छैनन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्ट छाङ्गरुबाट नेपाल प्रहरी यसै साता तिङ्कर उक्लिने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ । “पहिले नै सर्नुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि तयारीमै ढिलाइ भइरहेको छ ।” प्रहरीका लागि गत कात्तिकमा खाद्यान्न ढुवानी गरिएको थियो । त्यसयता त्यो क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी भएको छैन । कात्तिकमा प्रदेश सरकारले खाद्य संस्थानको चामल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरेको हो । कात्तिकयता अहिलेसम्म सरकारले पनि खाद्यान्न ढुवानीमा चासो दिएको छैन ।
प्रहरीले तिङ्कर र छाङ्गरुको सीतापुल प्रहरीका लागि खाद्यान्न तथा थप जनशक्ति पठाउने तयारी गरेको छ । “अहिले पनि कोरोनाका कारण व्यासको छाङ्गरु र तिङ्करसम्म खाद्यान्नलगायत सामग्री ढुवानीमै समस्या छ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्ट भन्नुहुन्छ, “अहिले भइरहेको कठिनाइबारे माथिल्लो निकायमा लेखापढी गरेका छौँ, तर निक्र्यौल भएको छैन ।”नेपालतिर जान चार दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । बाटो राम्रो छैन । खाद्यान्न बोकेरै ढुवानी गर्न सकिने अवस्था नभएपछि प्रहरीलाई पठाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । छायालेकमा प्रहरी नायब निरीक्षक हर्क महताको नेतृत्वमा १५ जनाको टोली पठाउने तयारी गरिए पनि अझै सीतापुलमा इन्चार्ज कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गिएको छैन ।नेपालतिरको बाटो अझै पनि हिँड्डुल गर्न लायकको छैन । छाङ्गरुको सीतापुलमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा १० जना खटाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ । अहिले पनि हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्नलगायत जनशक्ति पठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्ट बताउनुहुन्छ ।छाङ्गरुमा नेपाल प्रहरीको अत्याधुनिक भवन निर्माण हुने त्रिदेशीय सीमा नजीकै व्यास–१ छाङ्गरुमा नेपाल प्रहरीको पनि अत्याधुनिक सुविधासहितको भवन निर्माण हुने भएको छ । लामो समयदेखि जीर्ण भवनमा बस्दै आएका सीतापुल प्रहरीका लागि नयाँ अत्याधुनिक भवन निर्माण हुने भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा आठकोठे सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुन लागेको नायब उपरीक्षक भट्टले बताउनुभयो । “भवनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ”, प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले भन्नुभयो, “छिट्टै निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गर्ला ।”भवन निर्माणपछि जीर्ण भवनमा ड्युटी गर्दै आएका प्रहरीलाई राहत हुनेछ । यस वर्ष सशस्त्र प्रहरीको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण शुरु भएपछि प्रहरीले पनि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सीतापुलमा निर्माण हुने भवनका लागि कूल रु दुई करोड तीन लाख लागतमा रोयल एलबी एन्ड एबी जेभी धनगढीसँग सम्झौता भएको छ । भवन निर्माणका लागि गत वैशाख १२ गते सम्झौता भइसकेको निर्माण व्यवसायी लालबहादुर बमले बताउनुभयो । दुई वर्षभित्र भवन निर्माण कार्य सक्नुपर्नेछ ।भवन निर्माणमा झण्डै ४० घनमिटर काठको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीको भवनको जस्तै डिजाइनमा नेपाल प्रहरीको भवन निर्माण हुन लागेको हो । भवनको भित्र ढुङ्गाको पर्खाल हुनेछ भने बाहिर सबै काठको प्रयोग हुने छ । निर्माण व्यवसायी बमले भन्नुभयो, “भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।”भवन निर्माणमा बढी काठको प्रयोग हुने भएपछि अनुमतिका लागि अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले पनि माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने भएका कारण अनुमति प्राप्त भएको छैन । काठको अनुमति आउने बित्तिकै निर्माण कार्य अघि बढाइने गरी तयारी थालिएको निर्माण व्यवसायी बम बताउनुहुन्छ ।